Sirbaa har’waa kanaa yadannon isaa Uummataa bellaan rakkaachaa jiraaniif dha kan sirbamee! -
Sirbaa har’waa kanaa yadannon isaa Uummataa bellaan rakkaachaa jiraaniif dha kan sirbamee!
bilisummaa November 18, 2015	Leave a comment
Soddaa tokko male Rakkoo ummanii keenyaa qabaan ibsaa jirachuun isaanii baay’ee namaa bonssuu haa ta’uu garuu ergaa cimaa nuf dabrsuu isaanif imoo galata guddaa Ummataa oromoo biraa qabaan Saba birroo birraas akkasumaa beeltii yeroo hin keenuu aniis asuumaan waan dandenyuun mee lammii keenyaa biraan haa dhabaanuu maloo wayyanee akkaa dhumnee dhabmnuu barbadaa!!
Lammiin koo beelahee dheebotee
Osso qabuu dhabee rakkatee
Harkaa ormaa lalaa jiraa
Haa birmannuf nu wallin firaa
Tasa yoo jabatee
Didee garaan uumaa
Kan laammii abdatuu
Yaa lammii koo sumaa
Alagaan alagaa dha
Siiumaa hin yadatuu
Saba rakkon jiruuf
Garaan hin rifaatuu?
Gaafaa funyaan dhiigu
Ijii imimaan buufti
Rakkoon dhiigaa ofii
Gadoo namaafi kuusti
Maqaa tokkon nu beeku
Nu waliin waamamnaa
Tokko hirribaa dhabnaan
Tokko nagaan hin rafuu
Previous DAMMA DAAMUU GORSA DUBARTOOTA HUNDAAF. Dhiirotaaf kana dubbisuun dhorkaadha.
Next Baacoo:Abbaa Tureetif Dhaloota Qubee:Kutaa 1